Daawo: Wasiir Soomaali ah oo kormeeraya doorasho ka dhacday dal Afrikaan ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Daawo: Wasiir Soomaali ah oo kormeeraya doorasho ka dhacday dal Afrikaan ah
19th October 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano waxaa wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya ka mid noqday koox Afrikaan oo kormeereysay doorasho ka dhacday dalka Mozambique ee dhaca Koonfurta qaaradda Afrika.
C/llaahi Goodax Barre oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya ayaa ka mid noqday xubnihii kormeerayay doorashadii madaxnimo ee 15-kii bishan Oktoobar ka dhacday dalka Mozambique.
Goodax iyo ra’iisul wasaarihii hore ee Kenya, ahna hogaamiyaha mucaaradka, Raila Odinga ayaa waxey si wadajir ah u hoggaaminayeen guddiga kormeerka doorashada oo ka socday dalal ka mid ah kuwa qaaradda Afrika.
Wasiir Goodax ayaa intii uu ka qeybqaadanayey kormeerka doorashada la kulmay guddiga doorashada, madaxa maxkamadda sare ee Mozambique iyo madaxweynaha haatan talada haya, Filip Nyusi.
Mozambique oo ka mid ah dalaka colaadaha sokeeyye aafeeyeen ayaa doorashadan waxay u noqonaysaa tii 5-aad oo ka dhacda, ayna dadweyne fara badan usoo baxeen.
Natiijada doorashada Mozambique ayaa lagu wadaa inay dhawaan soo baxdo iyadoo ay doorashadan ka qaybgaleen dad lagu qiyaasay 10-milayn oo ruux oo ka mid ah shacabka dalkaas.
Kormeerka uu ka qeybgalay wasiir Goodax ayaa kusoo beegantay iyadoo lagu wado in sanadka 2016 ay Soomaaliya ka dhacdo doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha oo dadku soo dooranayaan sida la qorsheeyey.
Suxufiyiin codsaday sii deynta wariyaasha Shabeelle & Sky
Kooxda UN ee kormeerka hubka oo labo eedood dusha uga tuuray madaxweynaha Puntland